नायिका सुस्मा कार्कीले पूर्व युवारज पारससँगको फोटो सेयर गर्दै लेखिन यस्तो स्टाटस ! – साँचो खबर
नायिका सुस्मा कार्कीले पूर्व युवारज पारससँगको फोटो सेयर गर्दै लेखिन यस्तो स्टाटस !
काठमाडौं : पछिल्लो समय चलचित्र अभियनबाट टाढा रहेकी अभिनेत्री सुस्मा कार्की सामाजिक सञ्जालमार्फत बेला–बेला चर्चामा आइरहेकी हुन्छिन् । केहि समय पहिला नाइटोमा फुली लगाएको भिडियो शेयर गरेर चर्चामा थिइन् । अझै केहि पहिला उनले सलमान खानसँगको फोटो शेयर गरेर पनि चर्चामा रहेकी थिइन् ।
शुक्रबार मात्रै अभिनेत्री कार्कीले पूर्वयुवराज पारस शाहसँगको फोटो शेयर गरेकी छन। ब्याक ग्राउन्ड हेर्दा दुवैजना बीच कुनै पार्टीमा भेट भएको जस्तो देखिन्छ । तर, उनले फोटोको ‘लोकेशन’बारे भने केही खुलाएकी छैनन। पारससँगको फोटो शेयर गर्दै कार्कीले फेसबूकमा लेखेकी छन्, हरेक दिन मैले भगवानबाट आशिष पाइरहेकी छु ।
र, म यसलाई एक नयाँ शुरुवात मान्दछु । हो ! सबैचिज सुन्दर छ । आदरणीय युवराजसँग । सुस्मालाई उनका प्रसंशकहरुले पारस सँग कहाँ भेटेको ? यो तस्वीर कहाँ लिएको भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । त्यसमा भने उनले केही जवाफ फर्काएकी छैनन् । तर कतिपय न’करात्मक प्रतिक्रियमा भने उनले जवाफ फर्काएकी छिन् ।
Previous: ओली पक्षको तयार भो प्रचण्डलाई ‘हेग’मा पुर्याउने प्रस्ताव
Next: न्यानो हुन लुगा लगाएर मात्र हुँदैन, जाडोमा खानुस् यी खानेकुरा